Iindaba - Kuyakwenzeka ntoni ukuba i-cylinder head gasket yaphukile
Injini yesilinda yentloko gasket evuthayo kunye nenkqubo yokucinezela ukuvuza komoya kukusilela rhoqo. Ukutsha kwe-Cylinder head gasket ukutsha kuya kuyonakalisa imeko ye-injini, okanye kungaphumeleli ukusebenza, kwaye kunokubangela ukonakala kwiindawo ezithile ezinxulumene noko; Ukucinezelwa kunye nokubetha kwamandla kwenjini, ukutywinwa kwendawo ephezulu yepiston kufuneka kunganyanzeleki, Akukho kuvuza komoya.
1. Ukungaphumeleli kokusebenza emva kokuba i-cylinder yentloko eyaphukileyo yaphukile
Ngenxa yeendawo ezahlukeneyo zesilinda yentloko etshisiweyo, imiqondiso yokusilela yahlukile:
ukuvuthela phakathi kweesilinda ezimbini ezikufutshane
Ngaphantsi kwesiseko sokungaguquki kuxinzelelo, ndagungqisa i-crankshaft kwaye ndaziva ngathi uxinzelelo kuzo zombini iisilinda alwanelanga. Xa injini yaqalwa, kwavela umsi omnyama, kwaye isantya senjini sancipha kakhulu, sibonisa amandla angonelanga.
2. Intloko yesilinda iyavuza
Irhasi yoxinzelelo oluphezulu ibalekela kumngxuma wesilinda yentloko okanye ukuvuza okuvela kumphezulu odibeneyo wentloko yesilinda kunye nomzimba. Kukho igwebu elityheli elityheli kwindawo evuzayo yomoya. Xa umoya uvuza kakhulu, uya kwenza isandi "esikufutshane", ngamanye amaxesha sikhatshwa ngamanzi okanye ukuvuza kweoyile. Ungayibona inqwelomoya yenqwelomoya ehambelana nayo kunye nommandla wayo ngexesha lokudiliza kunye nokuhlola. Kukho ngokucacileyo idipozithi yekhabhoni kumngxunya webolt yentloko yesilinda.
3, kwinqanaba leoyile yegesi
Uxinzelelo oluphezulu lwegesi lungena kwindawo yokuthambisa yeoyile phakathi kwebhloko yenjini kunye nentloko yesilinda. Ubushushu beoyile kwipani yeoyile bahlala buphezulu xa i-injini isebenza, i-viscosity yeoyile iba ncinci, uxinzelelo luyancipha, kwaye ukonakala kuyakhawuleza. Kukho amaqamza abonakalayo kwioyile ethunyelwe kwinxalenye ephezulu yentloko yesilinda yokuthambisa isixhobo sokuhambisa umoya.
4, irhasi yoxinzelelo oluphezulu ingena kwibhatyi epholileyo yamanzi
Xa i-injini yokupholisa ubushushu bamanzi ingaphantsi kwe-50 ℃, vula isiciko setanki lamanzi, uyabona ukuba kukho amaqamza acacayo anyukayo avelayo kwitanki lamanzi, kwaye umoya omninzi oshushu ukhutshwa emlonyeni wetanki lamanzi. Njengokuba ubushushu benjini bonyuka ngokuthe ngcembe, Ubushushu obukhutshwa emlonyeni wetanki lwamanzi buye banda kancinci. Kule meko, ukuba umbhobho wokugcwala kwetanki lamanzi uvalekile kwaye itanki lamanzi ligcwaliswe ngamanzi kwisiciko, imeko yokuvela kwamaqamza iya kubonakala ngakumbi, kwaye ukubila kuya kuvela kwiimeko ezinzima.
5, itankana lenjini kunye nebhatyi yamanzi okupholisa okanye ipaseji yeoyile ethambisayo
Kuya kubakho amaqamza amnyama atyheli-mnyama ajikelezayo kumphezulu wamanzi okupholisa kwitanki lamanzi okanye kuya kubakho amanzi acacileyo kwioyile epanini yeoyile. Xa ezi zinto zimbini ziqhushumbayo zibaluleke kakhulu, amanzi okanye ioyile iya kuba semdeni.